Vahaolana vonjimaika :: Hametraka fiarabe hitatitra rano isaky ny fokontany ny Jirama • AoRaha
Vahaolana vonjimaika Hametraka fiarabe hitatitra rano isaky ny fokontany ny Jirama
Manolotra vahaolana vonjimaika ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ny mponina amin’ny fokontany maromaro iharan’ny fahataphan-drano ny minisiteran’ny Angovo, ny rano ary ny akoran’afo sy ny orinasa Jirama. Tapaka tamin’ny fifampidinihan’ny roa tonta fa hohamafisina ny fitsinjarana rano amin’ny alalan’ny fiarabe.
Hametraka fiarabe hahazaka rano dimy hatramin’ny folo menatra toratelo eny amin’ireo fokontany izay tena ianjadian’ny tsy fisian-drano izy ireo.
« Toy ireny maka rano amin’ny paompin’ny daholobe ireny ny mpanjifa ka hisy ny sarany haloan’izy ireo, izay mbola tsy voafaritra », araka ny fampahafantarana nataon’izy ireo.
Hifampidinika amin’ny kaominina sy ny fokontany voakasika ny tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama amin’ity herinandro ity, hahafahana mandrindra ny asa sy mametraka olona hiandraikitra ny fizarana ny rano.
Betsaka ny tetikasa hataon’ny Jirama hialana amin’izao olan’ny famatsiana rano izao. Isan’izany ny fikarohana ireo loharano azo trandrahina hamokatra rano ho vahaolana maharitra. Ho an’ny faritra andrefan’Antananarivo dia voaresaka ny tetikasa hanaovana lava-drano miisa enina eny Ambohidrapeto ka vinavinaina hotanterahina amin’ity herinandro ity ny fitrandrahana andrana momba ny fitosahan’ny rano eny an-toerana.
Ny fahavitan’ny tobim-pamokaran-drano vaovao, etsy Amoronankona, no andrandraina hamaha ny olan’ny famatsiana rano amin’iny faritra atsinanan’Antananarivo iny, toy ny eny Ambohimangakely, Ambatomaro izay ho vita amin’ny faran’ny volana aogositra.
Manomboka ny 10 septambra ho avy izao no hamatsy iny faritra iny io tobim-pamokarana vaovao io, aorian’ny andrana sy fanamarinana farany, raha ny tatitra avy amin’ny minisiteran’ny Angovo, ny rano sy ny Akoran’afo taorian’ny fidinana ifotony teny an-toerana, omaly.